iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 8 ...: Waa kuwee iPhone ee lagu dooranayo 2019? - Teknolojiyada - Nambarada - WAAJIBAADKA RAADDAHA
ACCUEIL » TECH & TELECOM »IPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 8 ...: Waa kuwee iPhone ay dooranayaan 2019? - Tech - Numerama
Ma waxaad dooneysaa iPhone in 2019? Tirada Apple ayaa hadda la cusbooneysiiyay dhowr moodelna waa ay wadaagaan sawirka - yaan la xusin moodooyinka lagu iibiyo burburka kuwaas oo qiimeyntooda la kormeeri doono. iPhone 11, 11 Pro, 8, X ... Tilmaamahan ayaa kuu oggolaanaya inaad aragto waxoogaa cad oo tixgelin leh xulashooyinkaaga kahor intaan la sii deyn Sebtember 20.
Maxaad noo aamineysaa?
Waxaan u tijaabineynaa dhammaan alaabada Apple ee loo yaqaan 'Numerama' oo waxaan u isticmaalnaa maalin kasta, marka lagu daro si kalsooni leh iyo teknoloji ahaan loo daboolayo dhammaan dhinacyada astaanta.
2019, Apple waxay dib u eegis ku sameysay istiraatiijiyadeeda: iPhone XR waxaa lagu bedelay iPhone 11 iyo dhamaadka aadka u sarreeya ayaa lagu shaabadeeyey Pro. Iyaga oo soo bandhigaya 3 iPhone, oo ah mid caadi ah iyo laba ka mid ah qaybta sare, iyo dib-u-eegisteeda kala duwan si ay sifiican uga soo baxaan filashooyinka dhagaystayaasha la beegsaday, shirkadda Cupertino ayaa beddeshay habka wax looga qabanayo alaabteeda. Xulashada cidda doonaysa inay ku sii socoto iOS ama dib u cusbooneysiiso iPhonekeeda ayaa ah mid aad u adag, gaar ahaan maadaama isbeddelada u dhexeeya moodooyinka ay yihiin kuwa yar ama mid xagjir ah - runtiina kama dhexeeyo muunadaha la heli karo. Si ay u fududaato, iPhone hadda waxaa laga heli karaa dukaanka Apple ee la dayactiray, kaas oo ah fursad aad u fiican leeyihiin alaabooyin ka jaban, la isku halleyn karo oo dammaanad leh.
Haddii aad go'aansatay inaad dooratid iPhone cusub ee 2019, hagahan ayaa kaa caawin kara. Adiguna si aad si muuqata wax ugu aragto, waxaan go'aansannay inaanu u jebinno aragtida guud iyada oo loo eegayo miisaaniyaddaada.
Ogsoonow in noocaan, aan ku saleyneyno waayo-aragnimadayada wax soo saarka Apple iyo waxa jiilka cusub ay bixiyaan marka la barbar dhigo kuwii hore. Waxaan ka shaki qabnaa in gunaanadkeennii ay si aad ah ugu kala duwan yihiin imtixaannadeenna dhammaystiran, laakiin haddii aadan illaa daqiiqadda gaarin, sug illaa dhammaadka bisha!
Waxaan haystaa miisaaniyad aan xadidnayn
The iPhone 11 Pro ama iPhone 11 Pro Max
IPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max waa isku mid: haddii aad miisaaniyad u heysato, waa taleefannada casriga ah ee ay tahay inaad doorato. Labaduba waxay bixiyaan astaamo heer sare ah oo heer sare ah waxayna bilaabayaan moodeelka ugu muhiimsan ee taariikhda iPhone.
2019, iPhone Pro ilaa 3 dareemayaasha ayaa bedelaya iPhone XS. Way adkaan doontaa in la helo cilad ku jirta xaashiyaha xogta: processor-ka A13 Bionic labadaba waa laga awood roonaaday oo si fiican loo habeeyay, shaashadda OLED HDR waligeed sidan uma dhalaalayn (waxaan ka hadlaynaa 1 200 nits), baytarigu waa wax kayar saacadaha 4 wax ka badan jiilkii hore, Face ID ayaa loo hagaajiyay si uu u noqdo mid wax ku ool ah marka iPhone uusan ku jirin safka hore isla markaana uu iskiis u wanaagsanaado ... marka la soo koobo, waxba ma dhumi doonaan sannadaha soo socda .
Oo haddii taasi aysan ku filnayn, Apple waxay qabatay shaqo kaamirooyinka sida ay lagama maarmaanka u tahay khabiir ahaan. Saddexda muraayadaha (xagal ballaadhan 26 mm, xagal ballaadhan 13 mm iyo telephoto 58 mm) waa la isku daray si ay u qaadaan sawirada heer si faahfaahsan iyo sax ah oo u muuqda, sawirrada ay soo qaadeen xirfadleyda, si ay u riixaan xuduudaha sawir sawir gacmeed. Waxaan dareemaynaa inuu Pixel 3 ka gilgiley Apple aaminsanaantiisii ​​iyo inay lagama maarmaan ahayd in lala laabto wax dhammaystiran.
Sida gunno ah, Apple waxay umuuqataa inay horay u qaadday talaabo aag aan waligeed laga leexan: qabashada fiidiyowga. Saddexda kamaradood ayaa lagu dhajiyay warshadda inay yeeshaan midab isku mid ah oo ay isla shaqeeyaan si ay isu siiyaan macluumaad waqtiga dhabta ah midba midka kale ka helo. Subtlety ku farxi doonta faa'iidooyinka muuqaalka: codsi sida FilMic, oo u gaar ah macruufka, wuxuu bixiyaa in lagu soo bandhigo sawirrada saddexda dareeme si gooni gooni ah, isla isla shaashadda. Dabcan, waxaas oo dhan waxay ku qabtaan sawirada 4K ilaa xNUMX xirmooyinkiiba labaad.
Beddelka: iPhone XS
The iPhone XS kama badna mana ka yaraato bedelka iPhone X, kaasoo aan socon doonin sanad kalandar buuxa kahor intaan laga saarayn dukaanka Apple. Oo tanina sidoo kale waa kiiskii "iPhone XS" markii la yimid iPhone 11 Pro. Oo weliba, waa maxay casriga ah! Kaliya si daacadnimo ah, haddii aad ka timid taleefanka gacanta ee Apple ee lahayn laba dareeme oo aad rabto inaad haysato shey aan aad qaali u ahayn sannado badan, waa xulasho aad u fiican. Qiyaastaan, waxaan kugula talineynaa nooca yar ka badan kan weyn, kaliya si loo badbaadiyo xoogaa isbedel yar oo loogu talagalay maska ​​2019.
U fiirsashada si kastaba ha noqotee: waa casriga casriga ah lagana saaray kaydiyaha '10' Sebtember 2019. Waxay qaadan kartaa asbuucyo yar kahor intaanu qiimihiisu hagaagsaneyn. maanta waxaan ka helnay 859 € on Rakuten : wali waa xoogaa qaali ah marka la barbar dhigo iPhone 11 Pro 1 159 €.
Waxaan rabaa qiimaha ugu fiican ee lacagta
IPhone 11 waa xayawaanka loo yaqaan '2019'
Ka fog in ay ahaato hoosaad-hoosaad iPhone 11 Pro, iPhone 11 waxay soo saartaa tayo badan oo ah dhamaadka aad u sarreeya waxayna maamushaa inay sameyso talaabo weyn oo horay loo qaadayo marka la barbar dhigo iPhone XR ee ay badeleyso. Waxaa lagu tallin doonaa adiga oo aan ka labalabeyn haddii aad cusbooneysiiso iPhone iibsaday ka hor iPhone X.
IPhone 11 waa midka ugu raqiisan iPhone sedex 2019 waana xitaa ka raqiisan yahay iPhone XR la soo bandhigay sanadkii hore. Wixii loogu talagalay "809 €", Apple waxay bixisaa astaamo aad u sarreeya oo tayo sare leh iPhone 11 Pro oo ku jira jir ka duwan, oo leh midabo cusub. Maxaa kaa lumaya Shaashadda OLED shaashadda leh ee sawirku leeyahay iyo mid ka mid ah saddexda muraayadaha indhaha ee gadaasha. Dhanka kale, waxaad heli doontaa shaashad 6,1 LCD oo aad u ololeysa - taasi waxay horeyba u ahayd kiiska iPhone XR -, telefishanka biyuhu ka awood bato biyaha iyo isla barnaamijka TrueDepth oo ku yaal dhinaca hore sida moodooyinka qaaliga ah. 12 mpx camera, hagaajinta Wajiga 'ID' iyo 'selfmo video selfie' ayaa lagu daray.
Dhinaca sawir, iPhone 11 kama hadhsan: oo ay ku jiraan muraayad balaadhan iyo muraayad balaadhan, waxaad ka qaadaysaa sawirro ay weheliyaan tikniyoolajiyada software-kii ugu dambeeyay ee Apple si sawirro qurux badan loo sameeyo. Ma sugi karno si aan ugu aragno ficil ahaan waxa ay ku siiso, laakiin sidoo kale waxay la micno tahay in ka duwan iPhone XR, iPhone 11 waxay xaq u leedahay in ay muujiso xaalad Sawir muuqaal ah oo aad u horumarsan. Inta u dhaxaysa qaabkan cusub iyo iPhone XR illaa 100 € ka yar, shaki kuma jiro ilbiriqsi : doorbida kan cusub!
Waxaan rabaa inaan xakameeyo miisaaniyaddayda
Ugu fiican ee dhexroorrada '4,7 inji'
Eeg xaashida sheyga
Imaatinka iPhone 11, 11 Pro iyo 11 Pro Max wuxuu la imanayaa qiimo dhicis iPhone 8. Marka, waxay noqon kartaa fikirkaaga ugufiican haddii aad rabto inaad u gudubto jiil sarreeya adiga oo aan kharash badan galin. Xusuusin ahaan, kani waa afartii afaraad ee isla naqshadeynta: Apple waxay maamushaa badeecadeeda iyo wax soo saarkooda oo waad iska hubin kartaa in iPhone 8 ay tahay maalgashi muddo-dheer oo wanaagsan.
Intaa waxaa sii dheer, nooca noocan ah ee alaabtu kuu oggolaanayaa inaadan isla markiiba u tagin nooc diagonals-ka wejiga ah: waxaan ku sii nagaaneynaa cabbirrada '4,7 inji', oo aan aad u weyneyn oo weli gacanta ku haya.
Hadda 539 € oo ku taal dukaanka rasmiga ah, waxaan qiyaasi karnaa oo keliya inaan arki doonno inay hoos u dhacayso bilaha soo socda inta lagu gudajiro hawlgallada ganacsiga ee ganacsatada e-ganacsatada ah.
Tilmaamaha: 35 DHARKA DHAQANKA IYO CUDURKA || XAALADA FASHION EE GIRLS
Murashaxa "American Idol" oo la qaatay ku dhawaad ​​2 buugaagta fentanyl ayaa lagu xukumay xabsi - dad
Kiniiniyada dabka ee dabka loo yaqaan 'Amazon Amazon' ee Jimcaha madow laga bilaabo 29,99 $ - BGR
Leïla Bekhti hooyo da 'yar oo walwalsan: "J
Muujintii Boqortooyada: Sida uu Prince Edward u doortay cinwaan ku saleysan dabeecadda filim
Cameroon - Job Offers305
DADKA & LIFESTYLE7,870
Video dheeraad ah3,637